ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော iOS 14.5 ဗားရှင်းကိုသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော iOS 14.5 ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Jordi Gimenez | 26/04/2021 19:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 26/04/2021 19:06 | iOS 14
ဤဗားရှင်းအသစ်သည်ယခင်ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသတင်းကောင်းများထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ ထို့အပြင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိအားပေးနေချိန်တွင်ဤခက်ခဲသောအချိန်များတွင် iPhone နှင့် Apple Watch အသုံးပြုသူများအလွန်အမင်းမျှော်လင့်ထားသည့်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ရက်သတ္တပတ်များစွာနှင့်အတော်များများ beta ကိုဗားရှင်းပြီးနောက်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် iOS 14.5 နှင့် watchOS 7.4 ဗားရှင်းထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က Apple ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
1 သင့်မျက်နှာဖုံးကိုမဖယ်ဘဲ Face ID ဖြင့် iPhone ကိုသော့ဖွင့်ပါ
1.1 iPhone နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော PlayStation နှင့် Xbox Controllers
1.2 Search app တွင် "add objects" ရွေးစရာရှိသည်
1.3 iOS 14.5 ၏အသစ်အဆန်းများဗီဒီယိုအကျဉ်းချုပ်
သင့်မျက်နှာဖုံးကိုမဖယ်ဘဲ Face ID ဖြင့် iPhone ကိုသော့ဖွင့်ပါ
၎င်းသည်ဤဗားရှင်းအသစ်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ Apple က iOS 14.5 ဗားရှင်းတွင်ထပ်ထည့်နိုင်သည် မျက်နှာဖုံးပါသော Face ID ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုသော့ဖွင့်ပါTouch ID ပြန်လာရန်တောင်းဆိုသည့်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုဘဲ device ကိုသော့ဖွင့်နိုင်လိမ့်မည်၊
watchOS 7.4 ဒီ option နဲ့အများကြီးပတ်သက်။ ရှိသည်။ ထို့အပြင် Apple Watch ၏ operating system ဗားရှင်းသစ်သည်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် update version နှစ်ခုလုံးသည်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒီ function ကိုသက်ဝင်စေရန် iPhone setting ကိုသွားပြီး password အပိုင်းကိုသွားပြီး Face ID နဲ့ code ကိုသွားရမယ်။ အဲဒီမှာ Apple Watch နဲ့ iPhone ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ရွေးစရာရှိတယ်။
ဤရွေးစရာကို Apple Pay မှတဆင့်ငွေပေးချေခြင်း၊ သင်၏ဘဏ်၏ application များသို့သွားခြင်းနှင့် Face ID လိုအပ်သော 1Password ကဲ့သို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်အသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရလျှင်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကုဒ်ရှိသင်၏မျက်နှာဖုံးသို့မဟုတ်သော့ကိုဖယ်ရှားရန်မလိုအပ်ပါ.
iPhone နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော PlayStation နှင့် Xbox Controllers
၎င်းသည် iOS 14.5 ဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောအခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည် PlayStation နှင့် Xbox Controllers များသည် iPhone များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သွားသည်။ ဒီခလုတ်တွေကိုဖွင့်ဖို့၊ Bluetooth ကို ၀ င်ရောက်ဖို့လိုတယ်၊ Play Station ခလုတ်နဲ့ရွေးစရာခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးငါတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လူးဝစ်ပါဒီလာရဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းသူတို့အလွယ်တကူတွဲနိုင်တယ်။
ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေက iPhone နဲ့သဟဇာတဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကစားစရာအများကြီးပေးတယ်၊ ဒီ option လည်းဖြစ်ပါတယ် iOS 14.5 ဖြန့်ချိခြင်းမှယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည်။
Search app တွင် "add objects" ရွေးစရာရှိသည်
AirTags, လျှပ်စစ်စက်ဘီးမော်ဒယ်များသို့မဟုတ် Chipolo, များစွာသောအခြားသူများအကြား Apple ၏ "Search" option နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒီအသစ် "Add objects" option ကို ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးစေခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသောအရာဝတ္ထုများကို၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးတည်နေရာ၊ AirTags ရောက်ရှိခြင်းအတွက်ကျော်ဖြတ်သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။
အနီးကပ် 200 အသစ် Emoji သူတို့ကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်အောင်ထည့်ပြီးပါပြီ Siri အတွက်အသံသစ် (ယူအက်စ်တွင်) LTE ကိုကန့်သတ်ထားသည့် iPhone ၏ Dual SIM သို့ 5G ရောက်ရှိခြင်းကိုလက်ထောက်၏အသံပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အခြားကိရိယာများတွင်တွေ့ရှိရသောအမှားအယွင်းများနှင့်ပြfailနာများမှထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသောတိုးတက်မှုများစွာ ဒီဗားရှင်းအသစ်အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြန့်ချိသည်။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်၌၎င်း၊ iOS 14.5 ဗားရှင်းတွင် beta တွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိကြောင်းသတိပေးပြောကြားခဲ့သည်ဖြစ်ရာဤသတင်းများစွာသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်အတွက်အံ့အားသင့်စရာပါ။ ငါစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းငါနဲ့ငါနဲ့အတူတူအခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတဲ့တခြားအသုံးပြုသူတွေကြုံတွေ့ရတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့်မစောင့်ဆိုင်းတော့ပါနဲ့ Apple နှင့် iPhone နှင့် Apple Watch တို့အတွက်ဖြန့်ချိပေးခဲ့သောယခု version သစ်ကို download လုပ်ပါ။
iOS 14.5 ၏အသစ်အဆန်းများဗီဒီယိုအကျဉ်းချုပ်
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၌ယူကျုချန်နယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ iOS 14.5 သတင်းအားလုံးကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ယခု beta ဗားရှင်းအသုံးပြုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်။ ဒီကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဗားရှင်းယခုလူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်.
စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်သင်၏ iPhone နှင့် Apple Watch ကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးမွမ်းမံခြင်းမပြုပါနှင့် iOS သစ်တွင် Apple မှတင်ပြသောဤသတင်းများအားလုံးကိုရရှိရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 14 » ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော iOS 14.5 ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်
ဒါဟာငါ့ကိုအမှားတစ်ခုပေးသည်: Apple Watch နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဘူး။
Daniel P. ဟုသူကပြောသည်
HomePod ကို version 14.5 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် volume ၏ထိန်းချုပ်မှုများ (- +) ကိုအပေါ်ပိုင်းဘောင်ပေါ်တွင်အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်ထားရှိသလား။
Daniel P. သို့ပြန်သွားသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ မျက်နှာဖုံးနှင့်သော့ဖွင့်ခြင်းအသစ်သည် iPhone 11 pro နှင့် watch series4တွင် wifi နှင့် bluetooth ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အိမ်တွင်သာအကျိုးရှိသည်။ ထိုကိရိယာနှစ်ခုလုံးကိုနောက်ဆုံးပေါ် ios version သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။
မင်းကမင်းကိုဖြစ်ဖူးလား ?? သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်မေးပါ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Crash Bandicoot တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းအသစ် - အပြေးတွင်!
Apple က AirTags ကိုနှစ်နှစ်ကျော်ပြင်ဆင်နေသည်